कांग्रेसको प्रश्नः सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरु के गर्दैछन् ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कांग्रेसको प्रश्नः सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरु के गर्दैछन् ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ७ पुष सोमबार १४:३६
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउने सवालमा अडान लिन सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुगौलि सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कायम हुनुपर्ने विषयलाई सरकारले अडानका साथ राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
उनले सीमा सुरक्षा र अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयास बारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसंग माग गरेका छन् । उनले यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,“प्रधानमन्त्रीले के गरिरहनु भएको छ ? परराष्ट्र मन्त्रालय के गरिरहेको छ ? सरकारका अन्य निकायहरुले के गर्देछन् । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? हामी नेपालीहरु स्पष्ट छौ । कसैको हामीले के इन्च जग्गा मिच्नु पनि छैन । र नेपालको एक इन्च जग्गा दिनु पनि छैन । यो कुरा हामीले सप्रमाण भारत समक्ष किन राख्न सक्दैनौ ?’उनले सीमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिन सरकारलाई आग्रह गरे ।